CeleLove - Page6of7- News and Media
April 11, 2020 Cele Love 0
မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်ဖော်မလေးအဖေ ရင်ဖွင့်သံ(ရုပ်သံ) ကျွန်တော်အခုလက်ပွတ်ဖုန်းလေး ဝယ်ထားပေမယ့် မကြည့်တတ်ဘူး …။ ရွာကလူတွေက မင်းသား မင်းရာဇာ အိမ်မှာ မင်းသမီး ရှိလားဆိုပြီးပြောကြတော့ မင်းရာဇာနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ် ကြားနေတယ် ဆိုပြီး အသံဖိုင်အကူအညီ တောင်းနားထောင်တော့ နားထောင်မရဲလို့ဆုံးအောင် နားမထောင်နိုင် တဲ့ဘဝကို ရောက်ပါတယ် …။ ဆိုပြီး သမီးဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး […]
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိုင်းဖုန်းဆရာတော်
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ၁။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော် ကူးစက်ခံရမယ် …။ ၂။ ၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁. ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ်။ […]
လမ်းဘေးမှာ ထိုးရပ်ထားတဲ့ ဟိုင်းဂျက်ကားထဲမှာ လူတစ်ဦး သေဆုံးနေ…
လမ်းဘေးမှာ ထိုးရပ်ထားတဲ့ ဟိုင်းဂျက်ကားထဲမှာ လူတစ်ဦး သေဆုံးနေ… စစ်ကိုင်း အေပြီ ၁၁ ကားနံပါတ်က MDY 5M-8448 ဖြစ်ပါတယ် …။ စစ်ကိုင်း ချင်းစုမီးပွိုင့်အနောက်ဘက် အမှိုက်ပုံလမ်းကြားမှာ ဟိုင်းဂျက်ကား ထိုးရပ်ပြီး ကားခေါင်းခန်း ထိုင်ရက်သေဆုံးနေသူတစ်ဦး တွေ့ရှိရပါတယ် …။ စစ်ကိုင်းဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံရောက်ရှိနေပါပြီ။ ကား+လူ […]
မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေးကိစ္စကို ဝင်မပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှ မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြားရတာကြောင့် ကူညီသွားမယ်
မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေးကိစ္စကို ဝင်မပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှ မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြားရတာကြောင့် ကူညီသွားမယ် န်လေးဟာ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ စတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် လူမှုကူညီရေးမှာလည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေး ကိစ္စမှာလည်း သူ့အနေနဲ့ ဝင်မပါဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားကာမှ မိန်းကလေးရဲ့အကြောင်းတွေ သိရတဲ့အတွက် ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ […]
မင်းရာဇာအမှုမှ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင် တာမွေမြို့မရဲစခန်းအတွင်းဝင်ခွင့်မရ
မင်းရာဇာအမှုမှ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင် တာမွေမြို့မရဲစခန်းအတွင်းဝင်ခွင့်မရ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ တာမွေရဲစခန်းရောက်ရှိချိန်မှာ ရဲစခန်းထဲကို ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောပါတယ် …။ “စခန်းမှူးကိုကျွန်တော်က တရားလိုရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ယောက်တည်း တွေ့မယ်ပြောတာ တွေ့ခွင့်မပေးဘူးလေ…. ကျွန်တော်ငါးနာရီခွဲကစရောက်တယ် တခြားသူတွေကို ဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကျတော့ ဝင်ခွင့်မပေးဘူး … ကျွန်တော်က […]
သထုံဆေးရုံတွင် ခရီးသွားရာဇဝင် လိမ်ညာထားသည့် ကိုဗစ်သံသယ လူနာသေဆုံး
သထုံဆေးရုံတွင် ခရီးသွားရာဇဝင် လိမ်ညာထားသည့် ကိုဗစ်သံသယ လူနာသေဆုံး မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်ရှိ သထုံပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် ထိုင်းမှပြန်ရောက်ကြောင်းမပြောဘဲ သာမန်နေထိုင်စဉ်ရိုးရိုးဖျားနာသည့်လူနာအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ကိုဗစ်လူနာအဖြစ် သံသယရှိ၍ Quarantine ထားနေစဉ် ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါလူနာ သေဆုံးသွားကြောင်းသထုံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် […]
သူ့အသက်ကို ကယ်ရင်း ကိုယ့်အသက် ပေးလိုက်ရတဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်
သူ့အသက်ကို ကယ်ရင်း ကိုယ့်အသက် ပေးလိုက်ရတဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ် သူ့အသက်ကို ကယ်ရင်း ကိုယ့်အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ ဗြမ္မစိုရ်အသင်း၏ အရေးပေါ်ကားယာဉ်မောင်း ကိုဌေးအောင်ရဲ့ ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်ပါ …။ 9-4-2020 ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ကနေ လူနာပို့ပြီး ပြန်လာတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း […]
မွန်ပြည်နယ်မှာ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ(၁၀)ဦးအထိ ရှိလာပြီ…
မွန်ပြည်နယ်မှာ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ(၁၀)ဦးအထိ ရှိလာပြီ… မွန်ပြည်နယ်မှာ မတ် ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီ ၁၀ ရက်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးအထိ ရှိလာပြီလို့ မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုး ဒေါက်တာဝတ်မှုံက အတည်ပြုပါတယ် …။ သေဆုံးခဲ့တဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာတွေထဲမှာ […]
အနုပညာရှင်တွေအတွင်းရေးကို လိုက်ဖွတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင် နောက်ကြောင်းကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ဒေါင်းဝေ
အနုပညာရှင်တွေအတွင်းရေးကို လိုက်ဖွတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင် နောက်ကြောင်းကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ဒေါင်းဝေ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတွင်းရေးကိစ္စတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေတဲ့ Han Nyein Oo အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို ပရိတ်သတ်တော်တော်များများ သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လက်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းရာဇာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသံဖိုင်တွေကို လူသိရှင်ကြားဖြန့်ဝေပြီး အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို နှမချင်းမစာနာပြောဆိုတာကြောင့် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရတဲ့ Han Nyein […]
ရန်ကုန် ကုတင် ၅၀ဝ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် နပ်စ်မလေးတွေ ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ
ရန်ကုန် ကုတင် ၅၀ဝ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် နပ်စ်မလေးတွေ ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ ကုတင် ၅၀ဝ. ရန်ကုန် ရဲ့ နပ်စ်မလေးတွေ အကြောင်း ဖတ်ရင်း ပုံလေးကြည့်မိလိုက်တယ် …။ နှလုံးသားနဲ့ကြည့်ပါ။ ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ …။ သူ့နေရာ ငါဆိုရင်လည်း ဝင်ခံစားကြည့်မိတယ်။ […]